Ny famokarana valizy lolo eccentric Triple
Valizy lolo eccentric Triple, fantatra ihany koa amin'ny valizy lolo offset telo, dia valizy lolo avo lenta, natao ho an'ny fiasan'ny tsindry avo, mari-pana ambony ary haavo misokatra sy akaiky. Vary lolo misy kofehy mifono zaridaina, miaraka amina endrika matotra sy ma ...
Fanandramana sy fanitsiana valizy lolo: 1. Ny valizy lolo dia singa iray manara-penitra, pneumatic, hydraulic ary elektrika izay nesorina tanteraka alohan'ny nialany tao amin'ilay orinasa. Rehefa manamarina ny zava-bitan'ny famehezana izy dia tokony hanitatra ny lafiny roa amin'ny fidirana sy ny fivoahan'ny mpampiasa ny vavahady, hanidy ny ...
Ny fitsipiky ny fiasan'ny valizy lolo vita amin'ny metaly eccentric metaly telo: ho an'ny valizy lolo vita amin'ny metaly trondro eccentric, ankoatry ny eccentricity roa an'ny vatan'ny valizy sy ny takelaka valva, ny velaran'ny famehezana ny lovia valva sy ny seza valizy dia ao amin'ny endrika miendrika obliqu ...
Valveloba globe am-perinasa, ny karazan-tsolika rehetra dia tokony ho feno sy tsy mandeha tsara. Ny bolt amin'ny flange sy ny bracket dia tena ilaina. Tokony ho simba ny kofehy ary tsy avela hilamina. Ny voanjo mifatotra amin'ny handwheel, raha hita madiodio dia tokony hohamafisina ara-potoana, mba tsy hanaovana ny fifandraisana na l ...
(1) ny firafitry ny valvelobe eran-tany dia tsotra kokoa noho ny vavahady vavahady, ary mety kokoa ny fanamboarana sy ny fikojakojana. (2) ny fonosana famehezana dia tsy mora hitafy sy manoritra, famehezana tsara, misokatra sy manakaiky ny elakelam-bary sy ny vatan'ny vatan-kase tsy misy mihodina, ...
Fampitahana ny tombony sy ny fatiantoka amin'ny valves elektrika sy valves pneumatika, ny fahasamihafana misy eo amin'ny valizy elektrika sy valves pneumatika
Valve herinaratra Ireo mpikatroka valizy elektrika dia ampiasaina amin'ny foibe famokarana herinaratra na angovo nokleary, satria ny rafitra rano avo lenta dia mitaky fizotra milamina sy miadana ary miadana. Ny tombony lehibe ho an'ny mpikatroka herinaratra dia ny fitoniana avo lenta sy ny fanosehana tsy tapaka izay azon'ny mpampiasa ampiharina. Ny ambony indrindra t ...
Ny toetra mampiavaka ny valva fanoratana
1. Fandotoana: Izy io dia fomba fanodinana izay mampiasa milina fanaovana hosoka hampidirana tsindry amin'ny banga vy hamokatra déformation plastika hahazoana fametahana amin'ny fananana mekanika sasany, endrika sy habe sasany. 2. Iray amin'ireo singa roa lehibe amin'ny fametahana. Amin'ny alàlan'ny forging, ny as-cast ...
Ny toetra mampiavaka ny Casting valves
Valve fanariana dia valves vita amin'ny casting. Amin'ny ankapobeny, ny fanamafisana ny tsindry valves ataon'ny valves dia ambany (toy ny PN16, PN25, PN40, fa misy ihany koa ny avo lenta, izay mety hahatratra 1500Lb, 2500Lb), ary ny ankamaroan'ny kaliberany dia ambonin'ny DN50. Valve sandoka dia sandoka ary mazàna ...
Varavarana valizy vavahady lehibe azo alefa
Valve vy vy goavambe lehibe efa vonona halefa. Handeha lamasinina Sina-Eropa mankany Eropa izy io. Ny valizy Cast Iron Gate Valve lehibe dia be mpampiasa ny laharana lehibe amin'ny famatsian-drano, ny indostrian'ny rano, ny famatsian-drano sy ny rano, ny fikarakarana rano fako, ny rafitra famatsian-drano amin'ny tanàn-dehibe. Metal nipetraka wi ...
Fametrahana marina ny gasket valves
Mba hiantohana ny famehezana ny rafitry ny fantsom-pandefasana valva, ankoatry ny fisafidianana ireo fitaovana famehezana mety, ilaina ihany koa ny fametrahana ny gasket amin'ireto fomba manaraka ireto: ny gasket dia tsy maintsy apetraka eo afovoan'ny flange, izay manandanja indrindra amin'ny soroka. flanges; hiantohana ...
Ny fahombiazana sy ny toetran'ny valizy fanamarinana voafetra-mikoriana
Napetraka ao amin'ny fidiran'ny paompin-drano, ny valizy fanaraha-maso mametra ny LH45-16 dia ampiasaina amin'ny rafitra iray izay misy paompy maro mifandraika ary ny isan'ny singa dia novaina ho an'ny fanitsiana ny onja. Milalao ny anjara asan'ny famerana ny fikorianan'ny paompy ary mampiorina ny loha. Ny d ...
Ny fomba fampivoarana ara-teknolojika amin'ny indostrian'ny valva, fanaraha-maso valizy tafiditra
Miaraka amin'ny haingam-pandeha haingam-pandeha sy maoderina eto amin'ny firenentsika, ny indostrian'ny valva dia mivoatra tsy tapaka ihany koa, ary ny sehatry ny fampiharana dia mihalehibe hatrany. Amin'ny famokarana indostria maro, ny valves dia fitaovana indostrialy ilaina. Ny mafana ...